Buut na kọmputa site na LiveBoot CD
Buut na kọmputa site na LiveBoot USB
Olee otú ịtọ BIOS buut si CD / USB Drive
Wondershare LiveBoot 2012 Bụ ihe nile-na-otu buut disk enye 40+ ngwaọrụ izute niile mberede idozi na mmezi kwesịrị maka kọmputa gị. Ị nwere ike buut gị na kọmputa site LiveBoot CD ma ọ bụ USB Drive n'agbanyeghị na kọmputa gị jiri ma ọ bụ na-arụ ọrụ abnormally.
Cheta na: Ị nwere ike ịhọrọ ike a bootable CD / USB Drive site onwe gị mgbe nbudata LiveBoot 2012, ma ọ bụ i nwere ike ozugbo ịzụta a LiveBoot CD tinyere gị na iji, ọ bụrụ na ị na-atụ egwu nke gwụsịrị ike otu.
Nkebi nke 1: buut na kọmputa site na LiveBoot CD
Ị nwere ike ịhọrọ buut gị na kọmputa site a bootable LiveBoot CD n'agbanyeghị na kọmputa gị ma ọ bụ na-arụ ọrụ mkpọka abnormally. Dị nnọọ fanye LiveBoot CD n'ime kọmputa gị na Malitegharịa ekwentị gị na kọmputa, mgbe ahụ, ọ ga-buut onwe ya na-akpaghị aka.
Mụta banyere otú ike LiveBoot CD >>
Gịnị na-eme ma ọ bụrụ na kọmputa m na-apụghị buut si LiveBoot CD?
Ọ bụrụ na ị mepụtara a LiveBoot CD ịga nke ọma, Otú ọ dị, ka ike ghara buut na ya, ị pụrụ ịdị mkpa ka ịtọ gị CD / DVD-ROM dị ka ndị mbụ buut ngwaọrụ.
Cheta na: Ị nwere ike iji "buut NchNhr Key" (na-emekarị, ọ bụ F2 ma ọ bụ F12) iji họrọ buut na ngwaọrụ ma ị na-adịghị mkpa na-aga n'ime BIOS ịtọ buut usoro.
Nkebi nke 2: buut na kọmputa site na LiveBoot USB
Ị nwekwara ike ịhọrọ buut gị na kọmputa site a bootable LiveBoot USB mbanye n'agbanyeghị na kọmputa gị ma ọ bụ na-arụ ọrụ mkpọka abnormally. Dị nnọọ fanye LiveBoot USB Drive n'ime kọmputa gị na Malitegharịa ekwentị gị na kọmputa, mgbe ahụ, ọ ga-buut onwe ya na-akpaghị aka.
Mụta banyere otú ike LiveBoot USB >>
Gịnị na-eme ma ọ bụrụ na kọmputa m na-apụghị buut si LiveBoot USB Drive?
E nwere ihe abụọ mere gị na kọmputa na-apụghị buut si LiveBoot USB Drive:
• kọmputa gị BIOS na-adịghị ahazi buut ụdị USB mbanye.
• kọmputa gị motherboard anaghị akwado booting si USB mbanye.
Nkebi nke 3: Olee otú ịtọ BIOS buut si CD / USB Drive
Biko gaa n'ime BIOS Mbido ịba uru site ibidogharịa na kọmputa na-mgbe ahụ kụrụ kpọmkwem BIOS ọrụ isi na keyboard ka anya dị ka ihuenyo abịa. Dị iche iche na kọmputa na-emepụta nwere dị iche iche ọrụ igodo. Nka anyị depụta ihe ndị kasị nkịtị BIOS ọrụ igodo. • Hichapụ • F2 • F12
I nwekwara ike na-ezo aka nri n'elu nkuku ụlọ ma ọ na ala nke ihuenyo maka BIOS ọrụ isi. On kasị usoro a ozi ga-abịa na-agwa gị nke isi see ịbanye usoro ntọlite. N'okpuru ebe a bụ nseta ihuenyo nke a usoro malite n'elu na a Phoenix-Award BIOS. Rịba ama ozi na n'elu ngosipụta. System Mbido Utility site na ịpị F2 isi mgbe a ozi na-egosi.
Tinye buut ngwaọrụ nhazi menu. Ozugbo unu na-abanye System Mbido Utility ị ga-ahụ buut ngwaọrụ nhazi isi menu. N'okpuru ebe a bụ screenshot nke isi menu maka a version nke Phoenix-Award BIOS. Gị nwere ike ọ gaghị anya kpọmkwem otu ihe ahụ, ma ndị echiche bụ isi bụ otu ihe ahụ niile System Mbido Utility. Na nke a System Mbido Utility, ị pụrụ ịhụ buut ngwaọrụ nhazi menu. Gị nwere ike ịbụ na a dị iche iche udi. Ọ bụrụ na gị System Mbido Utility adịghị enwe onye Advanced BIOS Akụkụ Atiya, na-agbalị na-achọ site na dị iche iche ige ruo mgbe ị na-ahụ buut ngwaọrụ iji.
N'okpuru ebe a bụ screenshot nke buut Ngwaọrụ nhazi udi. Dị ka ị pụrụ ịhụ site screenshot, akpa buut ngwaọrụ ga-adị na CD / USB mbanye. Ọ bụrụ na ndị mbụ buut ngwaọrụ na gị usoro ka atọrọ ka ngwaọrụ ọzọ (ike mbanye atụ), nanị ịgbanwe ya ka CD / USB mbanye. Na screenshot n'elu ị pụkwara ịhụ ụfọdụ isi ntụziaka na otú ịgbanwe ntọala. Ozugbo USB Drive e debere dị ka ndị mbụ buut ngwaọrụ ị nwere ịzọpụta mgbanwe na wepuÚ System Mbido Utility. Iji mee nke ahụ, see ESC na-aga azụ isi menu, na iti ESC ọzọ ma họrọ S Ekele na wepuÚ ihe.
Cheta na: Ọ bụrụ na gị na kọmputa nlereanya adịghị akwado booting si USB Drive, ị ga-enwe ike ịhụ "USB" nhọrọ na a na ihuenyo.
Cheta na: E nwere theoretically ọtụtụ narị nsụgharị nke System Mbido Utility na nke a bụ nanị otu ihe atụ. Otú ọ dị, echiche bụ isi bụ otu ihe ahụ ha nile. Ọ bụrụ na gị Mbido adịghị anya otu ihe ahụ, ị nwere ike na-achọta ya ọzọ Atiya na-agbanwe buut ngwaọrụ iji.